Afhayeenka Al-Shabaab: Weerarkii Manda Bay waxuu qeyb kahaa ola-olaheena Qudus lama Yahuudeynayo – Hornafrik Media Network
Hoggaanka sare ee ururka Al-Shabaab ayaa xalay war ka soo saaray weerarkii ay Axadii lasoo dhaafay ku qaadeen saldhigga ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya ee ku yaalla deegaanka Manda Bay ee gobolka Lamu.
Afhayeenka Al-Shabaab Cali Maxamuud Raage Cali Dheere ayaa sheegay in ayaa weerarkii Maanda Bay ay ku dileen kuna dhaawaceen 17 askari oo Mareykan ah iyo sagaal askeri oo ka mid ah ciidamada khaaska ah ee dowladda Kenya, sida uu hadalka u dhigay.
“Saldhigga lagu magacaabo ‘Kaam Simba’ ayaa ah xero militari oo ay leedahay dowladda Mareykanka, waxaana ka howlgala boqolaal ciidamo Amerikaan ah. Waa taliska laga hago howlgallada uu Mareykanku ka wado waqooyiga Kenya, waa goobta ay reer galbeedku kasoo abaabulaan howlgallada basaasnimo ee ka dhanka ah Muslimiinta bariga Afrika.” Ayuu yiri Cali Dheere oo u hadlay Al-Shabaab.
Cali Dheere ayaa sheegay in weerarkii ay ku qaadeen ciidamada Mareykanka ee ku sugnaa Manda Bay uu qeyb ka ahaa olole dagaaleedka loogu magacdaray ‘Qudus Lama Yahuudeynayo’ kaas oo uu sheegay in lagu beegsanayo Mareykanka. “Maadamaba buu yiri uu Mareykanku weli maamulka Yahuudda ku garab siinayo una sharciyeeyey magaalada Qudus, si ay u deygaamaysato Yahuudu”.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sidoo kale sheegay inuu digniin u jeedinayo shacabka Mareykanka, “Farriinteena ku wajahan shacabka Mareykanka waxay tahay, ku seexda kuna soo toosa in inta dowladdiinu ay sii waddo inay maamulka Yahuudda ku taageerto dulmigooda ka dhanka ah ehelkeena reer Filistiin ee Muslimka ah, ciidankiinuna duulaan ku joogaan waddamada Muslimiinta, aadan marnaba amni iyo ammaan ku heli doonin gudaha dalkiina, ama dibadiisaba intaba”.